Momba anay - Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd.
Niorina tamin'ny taona 2000, Shenxian Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd miorina ao amin'ny faritanin'i Shandong, manana tantara 20 taona izahay ho an'ny synthesie simika tsara, simika biolojika, mpiasan'ny vondrona fanampiny simika. Izahay dia orinasa mpanamboatra manokana amin'ny famokarana Dibenzoylmethane (DBM) sy furfural. Ny orinasa dia mampiasa mpiasa 350 ankehitriny, ao anatin'izany ny 120 nahazo diplaoma avy amin'ny oniversite sy injeniera 21 ary manam-pahaizana ara-toekarena 5. Manana sampana efatra, Liaocheng shuiyuan furfural pabrik, Juyeluyuan furfural biokimika famokarana , Shangqiu juyuan famokarana simika ary Liaocheng shuiyuan teknolojia vaovao famokarana. Ny herin'ny teknika dia matanjaka, ny fitsapana dia tonga lafatra ary ny fitaovana famokarana dia tsara.
Amin'ny maha-famokarana matihanina lehibe indrindra an'izao tontolo izao an'i Dibenzoylmethane (DBM) manana tanjaka isan-taona 10.000 metric taonina, ho iray amin'ireo mpamokatra matihanina lehibe indrindra manerantany manana 30.000 metric taonina isan-taona. Ny vokatra dia ny methanol sy asidra acetic avy amin'ny vatan-katsaka, izay ampiasaina amin'ny famokarana Dibenzoylmethane sy furfural, fampiasana maro karazana, indrindra ho an'ny fanafody fametahana alikaola alikaola sy indostria simika tsara any amin'ny faritra. Ny vokatra voajanahary dia azo ampiasaina amin'ny famokarana fanafody, furfuryl alikaola, zava-manitra, tsiro, resins ary vokatra hafa.
Inona no tena vokarintsika?
Manao ahoana ny toeram-pamokarana ?
Izy io dia orinasa 83,916 metatra toradroa misy ny atrikasa 50.000 metatra toradroa. Orinasa manana mpiasa mihoatra ny 350, hery ara-teknika matanjaka, manana matihanina mirotsaka amin'ny ekipa teknika fikarohana sy fampandrosoana vaovao, ary mitazona fiaraha-miasa akaiky amin'ireo andrimpanjakana fikarohana siantifika malaza eto an-toerana , izahay dia manaraka ny foto-kevitry ny fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojia ary fiarovana ny tontolo iainana vaovao tsy misy poizina mpanampy hafanana PVC Dipenzoylmethane (DBM) sy furaldehyde sy furfural vokatra famokarana sy ny varotra orinasa isan-taona famokarana fahaizan'ny 40.000 taonina, ny orinasa dia izao tontolo izao mandroso teknolojia famokarana tsipika sy ny fitaovana famokarana Dibenzoylmethane (DBM) lehibe indrindra eran-tany, ny kalitaon'ny vokatra dia nahatratra ny ambaratonga avo lenta iraisam-pirenena.
Aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny mailaka anay:
raha manana fanontaniana ianao dia hiezaka izahay hamaly ao anatin'ny 12 ora.